Kwenze ngokwakho - iBezzia | Bezzia
Ezezindlu Yikho konke esikwenzayo lapho silungisa ikhaya lethu futhi lokho sikwenza ngesandla. Ngakho-ke, sifuna ukukunikeza amathiphu namasu azokusiza ugcine ikhaya lakho lisesimweni esihle kakhulu. Yiba i- umuntu osebenza ekhaya futhi ukulungisa zonke izinkinga ezivelayo kusemandleni akho futhi yingakho eBezzia sikubona kubaluleke kakhulu ukuba ngumhlahlandlela walezi zinhlobo zemisebenzi.
Akudingeki ukuthi ube ngumakhi wezitini, umdwebi, osebenza ngogesi noma umbazi ukulungisa lawo mabhodlela amancane angenzeka endlini yakho.
Ngaphezu kokwenza umsebenzi womzimba ngisho nokuthola umsebenzi wokuzilibazisa ku-DIY, lo msebenzi uyindlela enhle yokonga imali nokusebenzisa kahle izinsiza zethu, ikakhulukazi kulesi sikhathi senkinga yezomnotho.
Akukho kungabaza: sekuyisikhathi sokuba umphathi wendlu yethu.
Ama-countertops okhonkolo, ukubheja kwezomnotho nokwamanje kwekhishi
Uma ufuna ama-countertops asekhishini aletha umoya wesimanje ekhishini lakho futhi awonga, lawo…
I-motifs elula yokudweba odongeni lwekamelo lokulala lezingane
Uma ungumuntu wokudala ohlobisa igumbi lokulala lezingane kungaba inselele ethokozisayo. Futhi aba...
Imibono yokusebenzisa kabusha futhi unikeze impilo yesibili eminyango emidala
Ukunikeza impilo yesibili ezintweni ezindala ezingasafunwa muntu kuyindlela enhle yokusindisa nokudala ...
Guqula ifenisha nezesekeli zokuhlobisa ngeqabunga legolide
Iqabunga legolide ishidi elihle kakhulu legolide elishayiwe elisetshenziswa kusukela kumasiko amahle ...
Por UToñy Torres kwenza Izinyanga ze-9 .
Ukuhlobisa indlu ngezindwangu kuyindlela engcono yokuletha ukufudumala nokufudumala kwekhaya kuwo wonke amakamelo….
Ungayenza kanjani i-air freshener eqinile ukwenza amakha endlini
Ukwenza umoya oqinile ovuselele amakha endlini kushesha kakhulu futhi kulula kunalokho okungabonakala. Ngo…
Ukubuyisa isifuba esidala samadilowa kungumsebenzi ofanele kunoma ngubani, ngoba ngezinsizakusebenza ezimbalwa ungaguqula ifenisha endala noma ...
I-centerpiece ucezu olusemqoka ekuhlobiseni enye yefenisha ebaluleke kakhulu ...
Imibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngezimbali zephepha
Cishe akukaze kwenzeke kuwe ukuhlobisa ikhaya lakho ngezimbali zephepha. Nathi kuze kube sithola ...